Ukusuka kuMessina i-Winci entsha: Ikhadi Elikhethekile Lomhlaba Wonke elitholakala kuze kube nguKhisimusi
UVirgilio Degiovanni wethula amakhadi akhethekile we-Global Global bukhoma avela kuMessina
Ekugcineni umcimbi wenziwa Winci al I-Palacultura di I-Messina. Futhi njengoba bekulindelekile, kuvuse umdlandla omkhulu ezilalelini. UVirgilio Degiovanni, njengomshayeli onguchwepheshe njengoba enjalo, ukwazile ukujabulisa bonke ababambe iqhaza abeza, futhi sibonga isimemezelo se Ikhadi Lomhlaba Elikhethekile. Ake sibheke ukuthi kuyini.
Ividiyo = Ikusasa: khanyisa okwakho nge-TrovaWeb circ
Ividiyo: Amathuluzi amasu webhizinisi.
I ividiyo bayithuluzi lesikhathi esizayo, noma esikhundleni selesamanje. Imininingwane ye platform ividiyo mhlawumbe owaziwa kakhulu emhlabeni, i-YouTube, phezulu "kwezothando" lwabasebenzisi bewebhu. Futhi ucwaningo lwakamuva luyayiveza, olukhuluma ngentshalo eyandayo yabantu maqondana nalawa mathuluzi aku-intanethi.